ရိုးရာလေးပရိတ်သတ်တွေအတွက် မုဒြာခေါ်သံ ရုပ်ရှင်အညွှန်း - YOYARLAY Digital Media and News
ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်အားလုံး စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့နေ့လေး ရောက်ပါပြီ။ ဒီနေ့က ရုံတင်နိုင်ဖို့အတွက် ၉နှစ်လောက် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ မုဒြာခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရုံတင်တဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မြင်နေကျ မြန်မာဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာထဲကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေတောင့်တနေတဲ့ ပုံစံသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ကဲ မုဒြာခေါ်သံ ရုပ်ရှင် အညွှန်းလေးကို ကြည့်ကြရအောင်။
ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပ်မြေနဲ့ အသက်နှစ်နှစ်သား အရွယ်ကတည်းက ခွဲခွာခဲ့ရပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်ခြေချမိတဲ့ အချိန်မှာ အရာရာ အသစ်တွေချည်း ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဇစ်မြစ်ကို ပြန်တူးဖော်လိုနေတဲ့ အမျိုးသား ဂျေဒန် နဲ့ သူ့ကို အစစ အရာ ကူညီပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဆင်း အမျိုးသမီးငယ်လေး နှင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဂျေဒန်တစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေ ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် မွေးစားတဲ့ မိဘများနဲ့အတူနိုင်ငံခြားမှာ အခြေချနေထိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသက် ၃၀ အရွယ်မှာတော့ သူ့ကျောင်းမှာ ဘွဲ့အတွက် ပြင်ဆင်မယ့် စာတမ်းရေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂီတနဲ့ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းလေ့လာဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၈ ရက်သာ ဗီဇာသက်တမ်းရတဲ့ သူ့အတွက် သူသွားလေ့လာမယ့် ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေနဲ့မန ၱလေးကို သွားဖို့ နှင်းက တိုးဂိုက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကူညီပြီး လိုက်ပို့ပေးတာပါ။
သူတို့သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ပုဂံ ၊ မန္တလေး နဲ့ အင်းလေး စတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ ရိုက်ကွက်တွေကလဲ အံ့မခန်းပါပဲ။ ကင်မရာအယူအဆတွေကြောင့် တစ်ချိန်တစ်ခါက စက်ဘီးမြို့တော်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ မန္တလေးရဲ့ အလှအပတွေကို တကယ်ပဲ လွမ်းဆွတ်အောက်မေ့ဖွယ်ဖြစ်လွန်းလှပါတယ်။ မြင်နေကျပုံစံနဲ့မတူပဲ လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ ကင်မရာ အယူအဆ၊ နေရာ ၊ အလင်းအမှောင်ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှအပကို နိုင်ငံတကာက ရင်သပ်ရှုမောပြီး ချက်ချင်းလာလည်ချင်စိတ်ဖြစ်လောက်အောင်ကို လက်ရာက ပြောင်မြောက်လွန်းပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရမယ်ဆိုရင် ဂျေဒန်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘွဲ့စာတမ်းအတွက်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ သူ့မိဘရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပါ လိုက်ရှာနေခဲ့တာပါ။
ဂျေဒန်တစ်ယောက် လိုက်ရှာနေတဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေကို ရှာတွေ့သွားရဲ့လား ?
သူ့မိဘတွေကရော တကယ်ပဲ သေဆုံးသွားတာဟုတ်ရဲ့လား?
သွားရှာနေတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ နှင်းတစ်ယောက်ဟာလဲ ဂျေဒန့်ကို ဘာတွေ ကူညီပေးခဲ့လဲ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ခဲ့ကြလဲ?
မြန်မာဆန်ပြီး မိန်းမ ပီပီသသ ချောလွန်းလှတဲ့ နှင်းအပေါ်မှာရော ဂျေဒန်တစ်ယောက်ဘယ်လိုများ ချစ်စိတ်တွေ ယိုဖိတ်ခဲ့လဲ? ဆိုတာတွေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ငွေရောင် ပိတ်ကားပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ဇာတ်လမ်းအမြည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous Previous post: ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် နွေရာသီမှာ ရွေးချယ် တက်ရောက်လို့ရမယ့် သင်တန်းကျောင်းတွေ
Next Next post: ပြည်တွင်း သတင်းတိုကဏ္ဍ
ဒေါ်လာ (၁.၂) သန်းတန် လူပုံစံတူမွေးနေ့ကိတ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ကိတ်မုန့်ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဒပ်ဘီ ဝင်းဟမ် (Debbie Wingham)ဆိုသူဟာ ဒူဘိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအတွက် ဒေါ်လာ ၁သန်းတန် လူပုံတူကိတ်မုန့်ကို ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကိတ်မုန့်အဖြစ် စံချိန် တင်ထားခဲ့သူပါ။ မကြာသေးမီက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ အံဩသွားစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး…
Published: March 30, 201810:40 am Updated: May 14, 201911:09 am